Aqoobta afku waa furaha Finnishnimada - Asylum in Finland
Waxaa Finland ka jira labo luqadood oo rasmi ah, Finnish iyo Iswiidhish. Dadka Finnishka ah qiyaastii boqolkiiba 90 ayaa afka Finnishka ugu hadla sidii afkooda hooyo, Iswiidhishkana qiyaasti boqolkiiba 5. Dad badan oo u soo guuray Finland ayaa waxey ogaadeen in ay adag tahay in laysku dabbaro dalka haddii aan la aqoonin afka deegaanka looga hadlo.
Aqoonta afka Finnishka ama Iswiidhisku waa mid inta badan muhiim u ah helitaanka shaqada. Shaqooyinka qaarkood marka la qabanayo waa in labadaba la yaqaanaa. 36 sano jir asal ahaan Afghanistan ka soo jeeda ayaa iskudayo badan ka dib ka helay shaqo gade ah dukaan cuntada lagu iibiyo. Wuxuu sheegayaa in helitaanka shaqadu u baahan tahaya adkeysi badan.
Si fiican ayuu hadda ugu hadlaa afka Finnishka, laakiin wuxuu sheegay in habka uu luqada ugu hadlo ay adkeysay helitaanka shaqada. Wuxuu Finland ku bartay xirfadda sameynta baabuurta wuxuuna billowgi hore codsaday tobaneeyo shaqo oo xirfaddiisa ah.
”Milkiilaha meel lagu iibiyo baabuurta ayaa toos iigu sheegay in uu doonayo in uu shaqada u qaato qof Finnish ah, waayo macaamiisha ayaa sidaas jecel. Si fiican ayaan shaqada u aqaana, laakiin isaga ayaa ah milkiilaha aniguna waxaan ahay ajnabi. Maxaad sameyn kartaa?”
Ingiriisku ma beddelayo afka Finnishka
Finnishku si fiican ayeey u yaqaanaan af Ingiriisiga. Finland waxaa ka jira waajib waxbarasho oo sharciga ku saleysan, kaas oo dhigaya barashada luqada labaad ee dalka ka sokow barashada luqad qalaad. Waxaa sidoo kale dalka ka jira barnaamijyo waxbarasho oo Af Ingiiris ku baxa. Tan ayaa waxey sawir qaldan ka bixineysaa muhiimadda afka Finnishka.
”Arrimaha nolol-maalmeedka la xiriira waa lagu xallin karaa afka Ingiriiska, laakiin la qabsashada iyo nolosha oo dhan ayaa noqoneysa qabyo. Haddii aad codsaneyso waxbarasho, shaqo ama aad raadineyso saaxiibo, aqoonta afka Finnishku waa mid inta badan aan laga maarmin”, sidaas waxaa yiri nin asal ahaa Kurdi ah.
Waxaa fikraddaas la qaba nin kale oo ka soo jeeda Afghanistan.
”Marki aan imaadey si fiican ayaan ugu hadli jirrey afkaIngiriiska, waxaana u qaatay in taasi ay igu filan tahay. Markaas kaddib ayaan waxaa billaabay inaan baro jimicsiga waxaanse durbadiiba ogaaday in aanan shaqadan horumar ka sameynayn haddii aanan aqoonin afka Finnishka.”
Dalka Finland aqoonta luqada ka sokow shaqooyin badan ayaa waxaa ku xiran oo la isaga baahan yahay xirfad ama tacliin sare. Si loo shaqaaloobo waa in la heystaa aqoon ku filan, ama waa in si waafaqsan shuruudaha Finland loo dhameystiraa aqoonta dal kale laga soo bartay.
Afka Finnishku waa adag yahay, laakiin ma ahan wax aan la baran karin
Afka Finnishku wuxuu ka mid yahay bahda luqadaha Finnish-Ugri. Waxey marar badan sababtaa madax xanuun. Maadaama aysan jirin erayo ay isaga mid yihiin afkaada hooyo, baarashada luqadan waa in gebi ahaanba hoos laga billaabaa. Iswiidhisku waa luqad Indo-Yurub ah oo ka tirsan luqadaha Waqooyiga Yurub ee Germaaniga ah. Afafka uu bah-wadaagta la yahay waxaa kamid ah Norway, Danmark iyo Jarmalka. Afka iswiidhiska waxaa ku jiray erayo badan oo laga soo amaahday Faransiiska.
”Wadamo badan waxaa looga hadlaa ”Ingiriis jajab ah”, laakiin ”Finnish jajab ah” waa mid maqalkiisu dhif yahay. Ugu yaraan Finland waa in luqada si iska yara wanaagsan loo yaqaanaa”, sidaas waxaa yiri nin Afghanistan asal ahaan ka soo jeeda.
”Marka aad awooddo in si la fahmi karo aad arrintaada uga hadli karto adigoo isticmaalaya afka Finnishka, waxey kaa caawineysaa sameysashada xiriirka”, sidaas waxaa yiri nin Kurdi asal ahaan ka soo jeeda.
Billowga hore ma fududa in la barto Finnishka. Eray iyo naxwo ahaan luqado badan ayuu aad uga duwan yahay.
”Finnishku si weyn ayuu uga duwanyahay afkayga hooyo. Labada luqadood waxey ku qoran xuruufaha Laatiinka waxaana luqada loo aqriyaa sida loo qoro. Wax kale oo ka dhexeeyaa ma jiraan”, nin Soomaali ah ayaa sidaas yiri.
Si kastoo ay ahaatase barashada Finnishku ma ahan wax aan dhici karin. Waxey u baahan tahay sida dadka la wareystay ay sheegeen hawlkarnimo iyo go’aan qaadasho. Sida uu qabo nin asal ahaan Kurdi ah oo Finnishka si buuxda ugu hadla barashada luqada waa in la billaabaa islamarka dalka la yimaado.
”Arrintu ma ahan helitaan shaqo oo kaliya. Haddii aad waddan ku nooshahay, nolol caadi ah ku qaadato oo aad dadka wax la wadaagto, waa ceyb in aad ka cabato aqoon la’aanta afka.”